Boordiin Filannoo Itoophiyaa paartilee filannoorratti hirmataniif maallaqa raabse; mormitoonni komii qaban - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Boordiin Filannoo Itoophiyaa paartilee filannoorratti hirmataniif maallaqa raabse; mormitoonni komii qaban
Boordiin Filannoo Itoophiyaa paartilee filannoorratti hirmataniif maallaqa raabse; mormitoonni komii qaban
Boordiin Filannoo Itoophiyaa maallaqa duula filannoof oolu paartilee filannoo biyyooleessaa bara 2015 irraa qooda fudhataniif ramade. Guutummaan mallaqa duula filannoo 2015f ramadamee ture qarshii miliyoona 30 ture. Kana keessaa %45 kana dura kan gadi lakkifame. Amma inni hafe, jechuun %55, gadi lakkifamuu isaati kan boordiin kuni ifa taasise.
Akkataan ramaddii maallaqa kanaas dhibeentaa 45:35:15:10 irratti hundaaye. Kana jechuun %40n maallaqichaa laakkofsa kaadhimamtoota paartiileen siyaasaa dhiyeessan irratti bu’uurefameeti kan qoodamu. Haaluma wolfakkatuunn %35 maallaqicha kanaa kan paartilee bira gayu teessoo paartileen siyaasaa paarlamaa biyyattii keessaa qaban irratti hundaayuudhaan. Kan jechuun guutuun maallqa %35 (qarshii miliyoona 10.5) kuni kan kufu harka EPRDF itti. Kunis kan ta’eef guutummaa teessoo paarlaamaa biyyattii, tokkoon alatti, kan dhuunfate EPRDF waan ta’eef. Dhaabbiileen mormitootaa maallaqa %65 hafe keessaa, ammas EPRDF wojjiin, qooda isaan gayu eeggatu jechuudha.
Dhibbeetaan 15 maallaqa filannoof ramadamee laakkofsa dubartootaa paartileen siyaasaa kaadhimamtoota godhanii dhiyeessan irratti hundaayeeti kan raabsamu.
Filannoo bara kanaa irratti Boordiin Filannoo kaadhimamtoota dhiiraafi dhalaaf mataa matatti qarshii 2,066 fi 3,543 wolduraaduubaan kan ramade.
Haaluma kanaan paartiin Medrek qarshii miliyoona 2, Blue Party qarshii 700,000 akkasumas EDPn qarshii 800,000 argatu jechuudha.
Akka Boordiin Filannoo hanga ammaatti ibsetti manamaree biyyoolessaaf kaadhimamtoota 2,222 kan filannoof qophaayaa jiran. Manamaree naannootiif ammoo kaadhimamtoota 4,168. Paartileen filannoo 2015 irraa qooda fudhataa jiran 58 ta’uusaati ibsi boordii filannoo kan mul’isu.
Paartiin Medrek, kan OFC keessatti argamu, paarlaamaa biyyattiitiif kaadhimamtoota 300, akkasumas mana mare naannootiif kaadhimamtoota 700 dhiyessuu isaati kan ifa godhe.
Boordiin biyyattii kaadhimamtoota paartileen dhiyeessan qajeelatti osoo hinlabsine maallqa haganatu isin gaya jechuun isaa sirrii akka hintaane namoonni mooraa paartilee mormitootaa keessa jiran komatan. Adeemsaafi iftoomina qoodiinsa maallaqaa kana irraas hedduun shakkii qabu.
Previous articlePerezidaantii Masrii duraanii Muhaammad Mursii hidhaan woggaa 20 irratti murtaaye
Next articleCL: Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus marsaa itti aanutti dabran